डा केसीका माग १ : पूरा गर्न कति मुस्किल? कति सहज? :: डिबी खड्का :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
७ वर्षदेखि उस्तै माग, तर भएन पूरा
डिबी खड्का बिहीबार, असोज ८, २०७७, १२:३१:०८
काठमाडौं- डा गोविन्द केसी १९औं अनसनमा छन्। पटक–पटक उनी अनसन बस्ने र सरकारले सहमति गरेर तोडाउने गर्दा अनसनको १९औं शृंखला पुगेको हो। अनसनको शृंखला दोहोरिरहँदा धेरैलाई लाग्छ, 'डा केसी नयाँ–नयाँ माग ल्याएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहन्छन्।' तर यो सत्य होइन। हरेक अनसनमा उनले पूर्व सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्। त्योसँगै समसामयिक मुद्दालाई जोड्छन्।
सत्ताधारीहरू, सरकार समर्थकहरू र डा केसीलाई नरुचाउनेहरूले उनका 'समसामयिक मुद्दा'लाई विवादित बनाएर मुख्य एजेन्डा छायाँमा पारिरहन्छन्।